ကလေးဝမြို့မှ ကျောက်မီးသွေးကုမ္ပဏီအချို့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စည်းကမ်းနှင့် ညီ၊ မညီ တိုင်းဒေ - Yangon Media Group
ကလေးဝမြို့မှ ကျောက်မီးသွေးကုမ္ပဏီအချို့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စည်းကမ်းနှင့် ညီ၊ မညီ တိုင်းဒေ
ကလေးဝ၊ မေ ၁၆
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ကလေးဝမြို့နယ်၌ ကျောက်မီးသွေးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ ၁ဝ ခုခန့်ရှိသော်လည်း အချို့ကုမ္ပဏီများသည် သတ်မှတ် စည်းကမ်းနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိဘဲလုပ် ငန်းဆောင်ရွက်နေသောကြောင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဒေသ တွင်းမှ ပရဟိတအဖွဲ့များနှင့်သဘာ ဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ များမှ စောင့်ကြည့်ကြပ်မတ်စစ်ဆေး မှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
”ကလေးဝမြို့နယ်အတွင်းမှာ ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်နေတဲ့ ကု မ္ပဏီ ၁ဝ ခုရှိတယ်၊ အချို့ကုမ္ပဏီ တွေဆိုရင် သတ္တုတွင်းဥပဒေ၊ နည်း ဥပဒေ၊ အထက်ညွှန်ကြားချက်တွေ ကို လိုက်နာမှုမရှိတဲ့အပြင် နိုင်ငံ တော်ကရသင့်ရထိုက်တဲ့အခွန်ဘ ဏ္ဍာငွေကို ပေးသွင်းဖို့ပျက်ကွက် တဲ့အတွက် တူးဖော်မှုရပ်ဆိုင်းခိုင်း ထားရတာမျိုးလည်းရှိတယ်၊ အချို့ ကုမ္ပဏီတွေဆိုရင် သူတို့ထုတ်လုပ် တဲ့ကျောက်မီးသွေးတန်ချိန်နဲ့ စာ ရင်းမှာတင်ပြထားတဲ့ ကျောက်မီး သွေးတန်ချိန် ကိုက်ညီမှုမရှိတာ တွေလည်းတွေ့ရတယ်၊ နောက်ရှိ သေးတယ်။ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး ဌာနကို အကြောင်းကြားအသိပေး မှုမရှိဘဲ ထပ်ဆင့်ကူးကုမ္ပဏီကလုပ် ကိုင်နေတာတွေ ရှိတဲ့အတွက် ကျောက်မီးသွေးထုတ်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို စိစစ်ပြီးသတ်မှတ် စည်းကမ်းနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ကုမ္ပဏီ တွေကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ တုန်းက ထုတ်လုပ်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထား ခဲ့ရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်” ဟုတိုင်း ဒေသကြီး ချင်းတိုင်းရင်းသားရေး ရာဝန်ကြီးဦးလာလ်ထောင်ထန်း က မေ ၁၄ ရက်တွင်ပြောသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုး ရ၏ မှတ်တမ်းများအရ ကလေးဝ မြို့နယ်ရှိ ကျောက်မီးသွေးတွင်းများ မှ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျောက်မီးသွေး ၂၇၃၃၆၈ တန်၊ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျောက်မီးသွေး ၃၃၈၅၄၆ တန်၊ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်ပြီး ခဲ့သည့် မတ်လအထိ ကျောက်မီး သွေး ၂၁၄၆၉၁ တန်ထုတ်လုပ်ခဲ့ သည်။ ကလေးဝဒေသကျောက်မီး သွေးထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများ တွင် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များက မတော် တဆမှုသုံးကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သက် ဆိုင်ရာသတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ကုမ္ပဏီများမှ ကျပ်သိန်း ၂ဝဝ လျော်ကြေးအဖြစ် ပေးဆောင်ခဲ့ကြရသည်။
ယခုအခါယင်းကျောက်မီး သွေးထုတ်လုပ်နေသည့် ကုမ္ပဏီ များကို ဒေသတွင်းဖွဲ့စည်းထား သည့် ပရဟိတအဖွဲ့များမှလည်း ကောင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များမှလည်း ကောင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများမှ လည်းကောင်း စောင့်ကြည့်ကြပ် မတ်စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိ ကြောင်းသိရသည်။
မင်းဘူးမြို့နယ် ကျေးရွာခုနစ်ရွာမှ အိမ်ခြေ ၁ဝဝဝ ကျော် သောက်သုံးရေ ရရှိရေးဆောင်ရွက်ရန် လက်မ??
ဆောမြို့နယ်လေးကျေးရွာ လူကူးကြိုးတံတားကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်မည?
ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ပွဲတော်တွင် မြောက်ကိုရီးယား ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် မတွေ့အောင် မိုက်ပင်?
လမ်းလျှောက် သင်္ကြန်၌ ပါဝင်ဆင်နွှဲလိုသည့် ကုမ္ပဏီများ ပေ ၃ဝ အကျယ်ကို ကျပ် ၁ဝ သိန်းနှုန်းဖြင့် လာ
ခန္တီးနှင့် လဟယ် နေ့ချင်းပြန် သွားရောက်နိုင်၍ ဆိုင်ကယ်စီး လူငယ်ဈေးသည်များ ဝင်ငွေ အဆင်ပြေ
ရိုးမားနှင့် ပွဲတွင် ကွင်းလယ်လူ ကန်တီ ပြန်ကစားနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ကွန်တီ ခန့်မှန်း
သီဟတင်စိုးက အဓမ္မပြုကျင့်သည်ဟုဆိုကာ လိမ်လည်တိုင်ကြားခဲ့သည့် အိမ်အကူနှင့် ပွဲစားကို ဒုတိယအ?